FJKM Ampahibato Firaisana: Dimy minitra Malala Yousafzai
FJKM Ampahibato Firaisana : Dimy minitra Malala Yousafzai
Tantara marina ity tantara kely anio ity, tantaran'ny zazavavy teratany tao Pakistan antsoina hoe Malala Yousafzai.
Any amin'ny faritra nonenan-dry Malala, dia nanjakan'ny mpivavaka Silamo mpampihorohoro antsoina hoe "Talibans", ary tsy avelan'ireo Talibans ireo miditra any an-tsekoly ny ankizivavy rehetra. Mampiasa herisetra izy ireo ary mahavita mandoro ny sekoly ho an'ny ankizivavy mihitsy. Tia mianatra i Malala, ary dia niezaka nanohitra ny herisetran'ireo Talibans ireo. Anisan'ny fomba nanoherany an'izany ny fijoroana vavolombelona nataony ho an'ny orinasan-tserasera vahiny, gazety sy fahitalavitra, nampahafantarany ny olana mianjady aminy, ka nahatonga ny tafika tao Pakistan hiady sy hanohitra an'ireo Talibans ireo. Koa rehefa voatosika ireto Talibans ireto, ka afaka nianatra ny ankizivavy tao amin'ny faritra nonenany, dia anisan'ny nahatonga izany ny hetsika nataon'i Malala.
Tsy zava-mora anefa izany miady amin'ny mpampihorohoro manana fitaovam-piadiana izany. Indray andro, teo amin'ny faha-15 taonany i Malala, iny nirava avy nianatra iny dia notifirin'ny Taliban iray ka voa teo amin'ny lohany sy ny tendany. Nentina notsaboina haingana tany amin'ny hopitaly, ary nafindra hopitaly arifomba kokoa ka tonga hatrany Angletera mihitsy aza, ary tena efa kely dia kely sisa tsy nahafaty azy. Sitrana ihany anefa i Malala, volana vitsy taty aoriana ary vao mainka nampalaza azy sy nahazoany sehatra hanoherana ny tsy famelana ny ankizivavy hianatra iny fitifirana nanjo azy iny.
Nankasitrahan'ny olombelona izany fahasahiana sy fitiavan'i Malala ny ankizivavy toa azy izany mba ho afaka hianatra, ka tamin'ity taona 2014 ity dia nomena ilay loka lehibe Nobel-n'ny fandriampahalemana i Malala. Izany loka Nobel izany dia olona iray ihany no mahazo izany isan-taona, na olona roa no miara-omena azy indraindray.
Raha toy izany ny fijalian'ny ankizy any Pakistan mba te hianatra, aoka hisaotra an'Andriamanitra kosa isika aty amin'ny tany betsaka Kristianina aty, fa afaka mianatra any an-tsekoly isika, malalaka tsy mba misy mpampihorohoro sy mpanao herisetra. Aoka isika hazoto amin'ny fianarana rehetra atao, na any an-tsekoly hanovozam-pahalalana izany na aty amin'ny Sekoly Alahady hanovozam-pahendrena. Izany tantaran'i Malala izany koa dia aoka hahatsiarovantsika hatrany an'i Jesoa Kristy izay tena maty teo amin'ny hazofijaliana mihitsy noho ny fitiavany antsika rehetra.
"Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao, dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany." (Jaona 15:13)